Radiyo Muqdisho oo Mowjad khaldan ka hadlaya | allsanaag
Radiyo Muqdisho oo Mowjad khaldan ka hadlaya
Haddii Soomaaliya Isbedel ka dhacay maxaa ka reebay in wax laga bedelo Radiyo Muqdisho.
Sanado ka hore ayaan ku soo qornay websitka ALLSANAAG, arin jirta oo dhab ah. taas oo ah Ninka radiyo muqdisho ka taliya ayaa Muqdishona ka taliya. maalintii Siyaad Bare Xukunka xooga kula wareegay, meeshii ugu horaysay ee uu gacanta ku dhigay waxay ahayd radiyo Muqdisho, oo uu ka bilaabay hanuunintii wacyi gelintii kacaanku u gudbinayey bulshada Soomaaliyeed . maalintii Maleeshiyaadkii Caydiid ee Mudug uga soo hayaamay in Qaranka Soomaaliyeed burbutiyaan ay Muqdisho soo galeen magaca qura oo ay haysteen wuxuu ahaa Radiyo Muqdisho. Waana meeshii ugu horaysay ee gacanta ku dhigeen, kagana dhawaaqeen amarkii ugu horeeyey ee ahaa ha lagu dhaqaaqo bililiqo . Intii ka danbaysay hadba ninka Muqdisho ka talinaya ayaa Radiyo Muqdishona dantiisa gaar ahaaneed u isticmaalayey
Hadaba in maanta Radiyo Muqdisho oo malaayiin doolar loogu qaato u shaqaynta qaranka Soomaaliyee in uu cuna qabatayn ku soo rogo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo , oo haba yaraatee wax sawiro ah uuna ka soo qaadin xafladdii caleemo saarka waaa mid aan la aqbali karin oo u baahan in deg deg looga jawaabo, si uu ula jaan qaado isbedelka ka dhacay Soomaaliya
Sawirada ugu badan ee umadda Soomaaliyeed maanta ku farxsan yihiin muuqaal ahaan iyo maamuuska sharfta leh ee madashii madaxweynaha lagu caleemo saarayey waxa soo qaaday dhalinyaro Soomaaliyeed, oo ay umadda Soomaaliyeed isugu mid yihiin. Waa dhalinyaradii dhowaan sawiradii Qurxoonaa ee caalamku wada daawaday ka soo qaaday buurta Calmadow ee Soomaaliya
Hoos ka daawo sawirada uu Cali Ducaale ka soo qaaday xafladda Caleemo saarka. Dhalinyaradan Soomaaliyeed ee Qaran doonka ah waxay mudan yihiin in loo aqoonsado howsha u hayaan umadda Soomaaliyeed
← Madaxweynaha Dawladda Puntland oo ka qayb galay Caleema Saarka Madaxweynaha cusub ee DFS. Walaalaha Somaliland →